Miezaka Mamelona Hatrany Ny Fiteny Skolt Ireo Vehivavy Sámi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2018 5:22 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Português, Français, Italiano, Español, Català, 日本語, English
Tiina Sanila-Aikio mitarika atrikasa momba ny fiteny Sámi tao amin'ny Foibe Ara-kolontsaina Sámi Sajos . Sary: Nicholas Magand ho an'ny GEN
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 16 Febroary 2018 ity tantara nosoratan'i Lucy Sherriff ho an'ny GlobalPost ity. Navoaka eto indray izany ho ampahany amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Tsy toy ny filoha fahitantsika isan'andro akory i Tiina Sanila-Aikio. Ity vehivavy 34 taona ity no lehiben'ny vahoaka Sámi any Finlande, ilay hany mponina tompotany tokana ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Izy ihany koa no mpamorona ny rakikira rock voalohany indrindra amin'ny teny Skolt manerantany. Olona miisa 300 fotsiny anefa no mampiasa ny Skolt fiteny Sámi .
Miha-manjavona ny fitenin'ireo mponina Sámi na dia miisa 75.000 eo aza farafahakeliny ny isan'izy ireo. Ahitana foko miisa sivy samihafa ny Sámi manerana an'i Norvezy, Soeda, Rosia ary Finlande ary miteny fitenim-paritra samihafa izy ireo. Midika ny tsy fahampian'ny fianarana ny teny Sámi fa niha-lehibe tao anatin'ny tsy fampiasana ny fitenin-drazany ny tanora Sámis .
“Malahelo aho milaza fa vetivety dia nidina ny isan'ny mponina mampisa ny fiteny mitovy amin'ny Sámi ho fiteny fampiasa voalohany ,” hoy i Sanila-Aikio. “Mitombo ihany koa anefa mandritra izany ny isan'ny mponina Sámi.”
Nandritra ny taompolo 1960, 75 isanjaton'ny mponina Sámis no nampiasa ilay fiteny ho toy ny fitenindrazany, araka ny rakitsoratra tao amin'ny Foibe Ara-Kolontsaina Sámi tao Sajos . Nanambara ny fikarohana tamin'ny taona 2007 fa mpampiasa ny fiteniny ny 24 isanjaton'ireo Sámis , ary efa misy amin'ireo tenim-paritra sasany no efa nanjavona . Sivy amin'ireo fiteny miisa 11 ireo no mbola misy mampiasa, ary olona roa monja no mampiasa ny fiteny Ter Sámi .
Skolt Sámi i Sanila-Aikio ary lehibe tao an-tanànakelin'i Sevettijärvi izy, izay tanànakely mbola ahitana ny fahaveloman'ny kolontsaina sy ny fiteny Skolt tokoa. Tena mafana fo tokoa izy amin'ny famelomana ny fiteniny ary lasa mpampianatra sady mampianatra ao amin'ny Ivontoerana ho an'ny Fanabeazana Sámi ao Inari, sekolim-panabeazana ambaratonga faharoa miavaka iray mampianatra amin'ny fiteny Finlandey sy Sámi ary mampiroborobo ny kolontsaina Sámi manerana ny faritra.
“Tena nanahy mafy aho tamin'ny fironana, ary te hanao zavatra mikasika izany,” hoy izy. “Manana ny lalàna mikasika ny fiteny Sámi izahay – izay mandrakotra ny raharaha ahitana ireo Sámis manan-jo hampiasa ny fiteniny rehefa mifampiraharaha amin'ny manampahefana. Voalohany indrindra, tokony hanana mpiasa miteny ny fiteny Sámi ny manampahefana, ary faharoa, afaka maka mpandika teny izy ireo raha tsy mahay izany. Saingy tsy nitranga izany raha ny marina.
“Tena ady mafy izany.”
Raha tsy afa-po tamin'ny fampianarana ny Skolt Sámi i Sanila-Aikio dia nandrakitra rakikira rock miisa roa izy tamin'ny taona 2005 sy 2007 ary nanoratra hoe:
“Nankafy izany ny mponina Sámi. Lafonay avokoa ny rakikira rehetra navoakanay, izay miisa 2.500 teo. Fomba iray ahafahan'ireo tanora mba ho liana amin'ny fototra niaviany sy mba hahaveloman'ny fiteny amin'izao fiainana andro maoderina izao ny hira rock amin'ny fitenin'izy ireo. “
Mifandray akaiky amin'ny fomba fiainan'ny Sámi ny miteny Skolt — sy ireo fiteny Sámi hafa tahaka ny Inari Sámi — izay rahonan'ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany sy ny fitrandrahana ala tsy ara-dalàna ary ny tsy fisian'ny fiarovana ny tany.
“Rehefa misy ny lalam-baovao naorina eo amin'ny tanimbolinay izay fihinanam-bilon'ny biby fiompy, na misy ny ala voaripaka, dia manova ny fomba fiainanay izany”, hoy i Sanila-Aikio nanazava. “Tsy azo ampiasaina ho fihinanam-bilon'ny biby fiompy intsony io faritra io.
“Noho izany, manjavona ny fahalalana nentim-paharazana sy ny fomba fampiasana io faritra io. Tsy afaka mampianatra izany amin'ny taranaka hoavy intsony izahay, ary izany no mahatonga ny fiteny ho adino – satria miova ny kolontsainay.
“Saingy tsy mampiaraka ireo zavatra ireo ny governemanta, ary izany no asa sarotra indrindra ho anay amin'izao fotoana izao – miezaka mamaha ny olana momba ny fahaverezan'ny kolontsainay sy ny fiteninay.”
Amin'izao fotoana izao, tsy afaka mianatra ilay fiteny ireo ankizy Sámi monina any ivelan'ny faritra misy ny mponina Sámi. Ampianarina amin'ny fiteny Finlandey ny fandaharam-pampianarana, ary na dia afaka mianatra izany any amin'ny oniversite aza ny Sámis, dia miovaova ny fahafahana manao izany.
Mpanao gazety ao amin'ny fikambanan'ny fampitam-baovao Finlandey,Yle, i Sara Wesslin izay manana foibe amon'ny Inari ao amin'ny Foibe Ara-kolontsaina Sámi Sajos, izay sady lapan'ny Parlemanta Sámi ihany koa.
Ny Foibe Ara-kolontsaina Sámi Sajos dia sady tranon'ny Parlemanta Sámi no onjam-peo Finnois, Yle. Sary: Lucy Sherriff / PRI
Mandefa fandaharana amin'ny onjam-peo sy amin'ny fahitalavitra amin'ny fiteny Skolt Sámi ilay vehivavy 28 taona, ary izy no iray amin'ireo mpanao gazety roa eto amin'izao tontolo izao manao izany – araka ny fahafantarany azy. (Mpiara-miasa amin'i Wesslin ao Yle, Erkki Gauriloff ny iray hafa .)
“Tsapako fa manana andraikitra lehibe aho amin'ny fametrahana ity fiteny ity mba ho re sy ho hita,” hoy i Wesslin. “Monina ao amin'ny faritra tsy ahitana fahita mpiteny Skolt Sámi matanjaka sy velona aho, ary tsy maintsy mikarakara izany izahay.”
Nilaza i Wesslin fa zava-dehibe ho azy ny fahafahana miteny sy miasa amin'ny fitenindrazan'ny renibeny.
“Tsy nianatra ny Skolt ho toy ny fitenindrazana aho – fa ny Finlandey – ary voatery tsy maintsy miasa mafy aho noho izany mba hamelomana hatrany ilay fiteny. Ao amin'ny fianakaviako, izaho irery ihany no miresaka amin'ny fiteny Skolt miaraka amin'ny renibeko, saingy tena sarotra izany satria ny fiteny Finlandey no nampiasany nandritra ny 20 taona. Nitaky ezaka lehibe avy aminay mianaka izany.
” Iray amin'ireo toerana vitsy ahafahako mihaona amin'ny olona miteny Skolt-Sámi ary mampiasa ny fiteniko ny asako amin'ny maha mpanao gazety ahy.”
Sara Wesslin mandefa fandaharana amin'ny fiteny Skolt Sámi ao amin'ny onjam-peo Finnois Yle. Sary: Ville-Riiko Fofonoff
Nizara ny ahiahin'i Sanila-Aikio momba ny hoavin'ny Skolt i Wesslin ary nilaza fa ny vehivavy no fototra ijoroan'ny fiteny mba ho velona.
” Manana andraikitra lehibe amin'ny fitazonana ilay fiteny ao anatin'ny fianakaviany ny vehivavy. Mandany ny fotoanany miaraka amin'ny reniny bebe kokoa ireo ankizy, indrindra fa ho an'ireo fianakaviana Sámis mpiompy nentim-paharazana, izay matetika ahitana ireo lehilahy any ivelan'ny trano mandritra ny tontolo andro.
” Mafana fo amin'ny fianarana ilay fiteny ny olon-dehibe sy ny ankizy, saingy tokony ataontsika ny fomba izay ahatonga ilay fiteny Skolt Sámi mba ho lasa fiteny mahazatra amin'ny fampiasana amin'ny fiainana andavanandro.”
Manana andraikitra lehibe amin'ny famelomana ny fiteny ny fampitam-baovao, hoy izy nanampy. “Ary hitombo tsikelikely ny mozika sy ny kolontsaina malaza hafa izay vokarina amin'ny fiteny Skolt Sámi.
“Heveriko fa manosika ireo ankizy hampiasa ny fiteny vitsy an'isan'izy ireo izany.”
Nanangana ny ivontoeram-pampianarana hampianarana ny olon-dehibe sy ny tanora ny kolontsaina Sámi ny Parlemanta Sámi ary nanolotra ny fianarana teny Sámi mandritra ny iray taona. Tohanan'ny Vondrona Eoropeana ara-bola ny fandaharan'asa, saingy nilaza i Sanila-Aikio fa tsy nandray anjara tamin'izany ny governemanta – ary izany no hiadian'ny parlemanta mafy.
Mihevitra ny hitarika izany amin'ny alàlan'ny ohatra i Sanila-Aikio. Sady mianatra ny fitenindrazany, Skolt Sámi, ny zanany vavy 8 taona, Elli-Då'mnn, no mianatra ny fiteny Inari Sámi izay fiteny ampiasain'ny fianakavian-drainy.
Tsy manam-potoana firy i Sanila-Aikio hanaovany mozika ho an'ny rakikira hafa misy hira rock noho ny andraikitra sahaniny amin'ny maha filoha azy, saingy mbola tsy nidaboka izy : “Mety indray andro any angamba.”
Tany Finlandy i Lucy Sherriff no nanoratra ny lahatsoratra.